शीतगंगगामा जमिन भासियो ३०० घरलाई खतरा ! « Pen Nepal
शीतगंगगामा जमिन भासियो ३०० घरलाई खतरा !
Published On : 29 September, 2020 6:57 am By : पेननेपाल
बुटवल । अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकाका दुई वटा वडामा जमिन भासिँदा तीन सय घर जोखिममा परेका छन् । नगरपालिकाको वडा नम्वर ११ को ढुंगेशेरा र वडा नं. १२ को कोठिया मैदान क्षेत्रमा जमिन भासिँदा करिब तीन सय घर जोखिममा परेका जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले ठहर गरेको हो ।
घर भत्किएका र पहिरोको जोखिम रहेको गाउँलाई स्थानान्तरण गर्न उपयुक्त ठाउँको खोजी गर्न नगर प्रमुख अधिकारीको संयोजकत्वमा अर्को समिति पनि गठन भएको छ । उक्त स्थानमा तीन–चार वर्षअघिदेखि जमिन धाँजा परेको थियो । स्थानीयले धाँजा पुर्दै खेती गर्दै आएका थिए ।
सबै साथानीय तहमा अस्पताल बन्ने, मंसिरमा एकैसाथ शिलान्यास
काठमाडौं । सरकारले सबै स्थानीय तहमा निर्माण गर्न लागेको अस्पताल भवनको शिलान्यास आगामी मंसिर १५
नेपाल र ओमानबीच भिषा छुट सम्झौता
काठमाडौं । नेपाल र ओमानबीच नेपाली तथा ओमानी कूटनीतिक, विशेष, सेवाकालीन तथा सरकारी राहदानी वाहकलाई
केएमसीको तेश्रो तलाबाट हाम्फालेका युवाको मृत्यु
काठमाडौं । सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी) अस्पतालको तेस्रो तल्लाबाट हाम्फालेका रोशन खड्काको मृत्यु भएको
मन्दिरमै ‘खिइयो’ २ किलो सुन !
काठमाडौं । पाशुपत क्षेत्रस्थित गुह्येश्वरी मन्दिरको गर्भगृहमा रहेका अष्टदल र भैरवको मूर्तिमा प्रयोग गरिएको सुन
फेरियो ललितपुर नगर प्रहरीको पोशाक
काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाले नगर प्रहरीको पोशाक परिवर्तन गरेको छ । नागरिकले नगर प्रहरीलाई हेर्ने
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले आफ्नो दसैँ भत्ता कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा